ဤဆောင်းပါး၌ထငျရှား “ NewYork” မဂ္ဂဇင်း။ "
ကျနော်တို့က Neil Young ကအဆိုပါငိုကြွေးခြင်းနဲ့အတူခန့် 25 မိနစ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့င်ပြီးနောက်ငါပြန်သူမ၏အရှေ့ကျေးရွာတိုက်ခန်းမှာနေတဲ့ဘရော့ဒ်ဝေးရှိုးမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့်သရုပ်ဆောင်၏ညဥ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းအစ, ငါဆိုသည်ကားချင်ပါတယ်, ငါ့ကိုမှလာ သီချင်းသူမ၏ရာဘေးစားပွဲပေါ်လက်ပ်တော့ပ်ထဲက "တစ်ဦးအချိန်လာ" ။ အဆိုပါအခြောက်လှန်းထွက်ကွန်ဒုံးအကြှနျုပျကိုအပြည့်အဝ-body နင်စေကိုင်ခဲ့ပေမယ့်ငါစိတ်အားထက်သန်စွာတဦးတည်းကိုပိုမိုကွန်ဒုံးလိုအပ်သောလုပ်မဟုတ်ကြောင်း, ကွာချပေးထားရှိမည်သကဲ့သို့ငါပြီးသားလတ်ဆတ်တဲ့တဦးတည်းအပေါ်ထားရန်နှစ်ကြိမ်ရပ်တန့်ချင်ပါတယ်, ငါသိတယ် ခြားနားချက်။ ကိုယ့်အမှုအရာထိုမိနျးမ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ရှုပ်ထွေးစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်မလုံလောက်ရိပ်နှင့်အတူ, သူတို့ကမကြာခဏလုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းထွက်ကစားနဲ့ငါ့ထံမှတောင်းပန်များနှင့်အဆင်မပြေအရှက်ကွဲခြင်း mumbled ကြလိမ့်မယ်, ထပေးထားခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုညဉ့်, လိမ္မာပါးနပ်ဒဏ်ခတ်-နိုင်ခြင်းအမှန်တကယ်ချွတ်ရရန်, ငါသည်ကိုယ်တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပျံတွေ့ရှိခဲ့: ငါကကိုဖြည်းဖြည်းချင်း။
အဘယ်ကြောင့်ငါသည်, မိမိသုံးဆယ်တစ်ဦးကျန်းမာကောင်လေး, အတုတစ်ခုအော်ဂဇင်လိုအပ်မလဲ ဒါဟာ mystifying ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအာရုံခံစားမှုလျော့နည်းကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ငါကြားချင်ပါတယ်အရာစိတ်မကျဆေး Antidepressants ပေါ်တွင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းများများရတယ်။ ငါရုံးတင်စစ်ဆေးမှတဆင့်သင်ယူအဖြစ်, ဒါဟာငါနှင့်အတူရှိ၏ပေးသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးအရေးမှမထင်ခဲ့ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အသုံးပြုသောကွန်ဒုံးဘယ်လို, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တဦးတည်းဝီစကီဖန်ခွက်သို့မဟုတ်တစ်ဆယ်လိမ္ချင်ပါတယ်ရှိမရှိ, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့က Neil Young ကသို့မဟုတ်အယ်လ်အစိမ်းရောင်စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင် နှင့်အမှား (အများအားဖြင့်အမှား) ။ လသင်တန်းကိုကျော်, ငါ lineup ထဲကတစ်ဒါဇင်သံသယရှိသူကောက်ယူနှင့်တဖြည်းဖြည်းအသီးအသီးရှင်းလင်း။ အများဆုံးသိသာ, ဖြစ်ကောင်း, မှလွဲ. ။
"babyish? ဒါဟာအသစ်တခု Synaptic လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ "ဒီယောဟနျသ Mayer Playboy နဲ့လင်းလင်းအင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်အရာဖြစ်တယ်။ "သင်တို့သည်နံနက်ယံ၌ထနိုးတစ် thumbnail ကိုစာမျက်နှာကိုဖွင့်ကပုံရိပ်ယောင်တစ်ခုပန်ဒိုရာရဲ့ box ကိုမှဦးဆောင်" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ "ဖြစ်ကောင်းငါအိပ်ရာထဲကရတယ်ရှေ့၌ငါ 300 ယောနိကိုမြင်သောအခါရက်ပေါင်းရှိခဲ့သည်။ "
porn ရဲ့သှေးဆောငျနှင့်နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရအတိအကျသတင်း titillating မပေးပါ။ နေဆဲဖြစ်နေဆဲသောမေးခွန်းတစ်ခုကို, သို့သော်, porn ၏ဤဆူနာမီပိုမိုယျကြိုးအတှကျ, သတ္တုတွင်းအမေရိကန်အထီး၏လိင်စိတ်ထိခိုက်သို့မဟုတ်မည်သို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာသူသည်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူသူ့ကိုချဉ်းကပ်ယောက်ျား၏နံပါတ်တစ်ကွဲပြားမြင့်တက်သတိထားမိကြောင်းရေးသားခဲ့သည်သူကိုမှ Ian Kerner တစ်လိင်တိုင်ပင်က Sanjay Gupta ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတစ် post ကိုဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ Kerner ငါနှင့်အတူအလွန်အကျွမ်းတဝင်ပေါ့ "Over-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ," တစ်ခုခုမှဦးဆောင်ရသောတစ်ဦး "ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လျင်မြန်စွာပြန့်ပွား" ကိုပြဿနာအများကြီး attribute မှပေါ်သွား၏။ ထိုအခါငါကောလိပ်ကျောင်း-အသက်အရွယ်ယောက်ျား၏ 25 ရာခိုင်နှုန်းကိုတွေ့ရှိရမယ့်တက္ကသိုလ်က Kansas ပြည်နယ်၏လေ့လာမှုအကြောင်းကိုဖတ်ပါသူတို့က, ငါဝန်ခံပါလိမ့်မယ်နားကြားဒါပမေဲ့အံ့သွနှစျသိမျ့ခဲ့သည့် orgasm, ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပြောခဲ့သည်။ ငါကွဲပြား porn-စောင့်ကြည့်အလေ့အထ (နှင့်အနည်းငယ်ကအရမ်းပွင့်လင်းစိတ်အမြိုးသမီးမြား) နဲ့ယောက်ျားများစွာတွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်အထိဒါပေမယ့်တချို့မျှော်လင့်မထားတဲ့ themes များပေါ်ထွက်လာမှစတင်ခဲ့ကြောင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ porn ဟာအလွန်အခြေခံကျအာရုံကြောအဆင့်တွင်လိင်အတွက်ယောက်ျားရဲ့ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုးပုံဖော်နေသည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းမျှော်လင့်မထားတဲ့တွန်းအားတွေရှိ-အမည်ရအမျိုးသမီးတစ်ဦးစီးရီးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ်အဘို့, လက် wringers ကရုဏာတော်မရှိဘဲနိုင်ငံ၏ကိုယ်ကျင့်တရားထည်ကိုက်ဖြတ်မယ်လို့တစ်ဦးညစ်ညမ်းကပ်ရောဂါသတိပေးပါပြီ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းနေတဲ့အနာရောဂါပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်လျှင်မူကား, ကအီဘိုလာရောဂါကဲ့သို့အလျော့နည်းပြီးပိုတဲ့ midwinter အအေးနဲ့တူရဲ့တဦးတည်းပါပဲ။ မကြာခဏမိမိတို့အနှစ်သက်ဆုံးတရားမဝင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအမှတ်အသားပြုကိုရှာဖွေတဲ့သူယောက်ျားတွေအများကြီးများအတွက်ကနဦးလက္ခဏာကသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များအတွက်ရက်အလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယောန * တစ် 34 နှစ်အရွယ်ကြော်ငြာအမှုဆောင်အရာရှိငါ SpankWire သို့မဟုတ် X ပေါ်မှာ get ဗီဒီယိုများ-သင်သည်ငါ၏ဒစ်နှင့်အတူရေခဲပန်းပုထွင်းနိုင် "ပြောတယ်။ ငါသော်လည်း, ဘားကနေမိန်းကလေးတစ်ဦးအိမ်မှာယူ, သူသည်ငါ့အပေါ်မှာချင့်နေချိန်မှာကျွန်မမိနစ်တက်သည်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါအပေါ်တစ်ဦးကွန်ဒုံးကိုတင်ငါတို့သည်မှာသွား start တစ်ကြိမ်က Challenger များကဲ့သို့ရဲ့ပေါက်ကွဲ-အပေါငျးတို့သအလံ ဝက်ရွက်တိုင်မှာပါ။ "
ထိုအခါ Stefan, မိမိဇနီးနှင့်အတူလိင်ရှိပါတယ်သည့်အခါမျှမပြဿနာနှိုးဆော်ခြင်းတဲ့သူတစ်ဦး 43 နှစ်အရွယ်တေးရေးဆရာ, ရှိပါတယ်။ "လာနိုင်ရန်အတွက်, သော်လည်း, ငါ porn ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းငါသိမြင်င့်သောငါ၏ဦးခေါင်း၌မြင်ကွင်းများကစားနှုနျးမှရရှိပါသည်။ တစ်ခုခုရှိကိုဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ဇနီးနှင့်အတူမရှိတော့ဘူး; ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းကိုအတွင်းပိုင်းပေါ့။ "
ယောဟနျသ Mayer သင်သည်အမြဲတစေရိုက်ချက်များများစွာအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်အော်ဂဇင် synthesizing နိုင်ပုံ ", Playboy ပြောပြသည်? သငျသညျကိုဘယ်လိုတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်း၏စိတ်ပညာမထိခိုက်ပါဘူး ... သင်ကကျိန်ဆို 100 ထဲကတဦးတည်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုသင်ပြီးအောင်, သင်နေတုန်းပဲပြီးအောင်မတဦးတည်းဖြစ်သွားရှာနေ? ဒါဟာလေရဲ့။ "(cumshot" Montage နှင့်အခြားလျှင်မြန်စွာ edited compilations ငါတွေ့ဆုံမေးမြန်းလူအများစုမှာ၏မြင့်တက်ခြင်းနှင့်လူကြိုက်များမှုကရှင်းပြသည်) ကိုညစ်ညမ်းကလစ်ဖို့ porn ကလစ်ထံမှလျင်မြန်စွာခုန်တဲ့အလားတူအလေ့အထရှိခြင်းဝန်ခံခဲ့သည် "။ Kerner ယခုအချိန်အထိဟူသောဝေါဟာရကိုဒင်္ဂါးပြားအဖြစ်သွားလေ၏ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကိုလိုငွေပြမှုရောဂါ။ " ယောက်ျားတွေအများကြီးများအတွက်သာမန်လိင်များ၏နှိုင်းယှဉ်သာမန်အေးဆေးတည်ငြိမ်မှ porn ရဲ့မီးရှူးမီးပန်းများနှင့် whiz-Bang ကနေဂီယာပြောင်းတစ်ခု Imax 3-D ကိုရုပ်ရှင်မှတစ်ဆင့်တစ်ဝက်ထွက်ခွာကဲ့သို့ဖြစ်၏ တစ်ဦး flipbook ထုတ်စစ်ဆေးရန်။
"ကျွန်မရဲ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့အိမ်ပြန် Race ဖို့အသုံးပြု," ပယ်ရီ, တစ်ဦး 41 နှစ်အရွယ်ရှေ့နေကပြောပါတယ်။ "အခုဆိုရင်ကျွန်မသူမမမရောက်မီအိမ်ပြန်ရ porn မှ masturbate နိုင်အောင်အစောပိုင်းတစ်နှစ်ခွဲနာရီအလုပ်လုပ်ရန်ထွက်သွားကြပါသည်။ " ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုများ၏သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးပယ်ရီကသူနေဆဲတဆယ်နှစ်နှစ်သူ၏ဇနီးမှဆွဲဆောင်ရဲ့အလေးအနက်ဆိုသည်။ သို့တိုင်သူကပြောပါတယ်, သူမအတော်လေးသူအွန်လိုင်းရှုမြင်အဆိုပါ porn ကြယ်များအထိတိုင်းတာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ "ယုတ်ဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကကျွန်တော့်ဇနီးထက်အိတ်အတွင်းအငယ်, ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်နှင့် Wilder နေရန်မဟုတ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ငါ့ကိုနှင့်သူမ၏ကျနော်တို့နေဆဲ '' လုပ် 'နှင့်အရာအားလုံး, ဒါပေမယ့်အစားနေ့တိုင်း, အဲဒါကိုတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပဲ။ ငါဒီ 'ကိုအခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး' 'ရရှိပါသည်နဲ့တူရဲ့ ... နှင့်' 'ကိုအခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး' 'porn ဖြစ်၏။ "
သူတို့နှစ်ဦးစလုံးတက်ရောက်စဉ်အခါတွင် Ron, 27 တစ်ခုဗိသုကာကျောင်းသား, သူ့ရည်းစားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူမသည်အခြားမြို့အတွက်ကျောင်းသွား, နဲ့ Ron တစ်ဘို့ပြင်ဆင်နေသော်လည်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်း၏အတိတ်စုံတွဲသည်, သူသည်သူတနေ့လုံးနှင့်အဘို့အပင်ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနဲ့ရိတ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့, မိမိအကြိုက်ဆုံး porn ကြယ်များနှင့်အတူအပတ်စဉ် "ရက်စွဲများ" ခဲ့ရဲ့ကပြောပါတယ် တိုက်ရိုက်လွှ-action ကိုဆုံရပ်။ "တနင်္လာနေ့ Gia ယော်ဒန်မြစ်အဘို့နေကြတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဆာရှာ Grey ကအဘို့အင်္ဂါနေ့။ " ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သူတစ်ဦး reprieve-ပေါ်တူဂီညဥ့်အတန်းအစားရှိပါတယ်။ "ငါသည်အစဉ်အမြဲကြာသပတေးမျှော်အရှိဆုံး-Kasey Kox ကိုကြည့်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ထို့နောက်တနင်္ဂနွေ, ငါသည်ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူထွက်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ " ရံဖန်ရံခါသူတနင်္ဂနွေမှာမိမိတိုက်ခန်းမှပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါတွင် Ron ကရှင်းပြသည်သူပြီးနောက်စွမ်းအင် leftover ထားပြီးအမှု၌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွေမှာနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရှာနေဝဘ် roams သူ့ဘာသာစကားလူတန်းစား။ သူက "ဟုဆို" ငါ porn ငါသည်ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူရှိဘာမှအစားထိုးနေသည်ယုံကြည်လိုမဟုတ်, ပြုပါ "ငါမူကားအစဉ်အမြဲလိင်ကိုခစျြတော့, ငါသည်အစဉ်အမြဲပြုလုပ်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါတကယ်ရပ်တန့်ရန်နှင့် သူမအမြဲသောအရာတို့ကိုအစပျိုးဖို့တစျခုဖွစျဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်သူမကမကြာသေးမီကငါ့ကိုမေးသော်အခါစဉ်းစားပါ။ ထိုမိန်းမသည်လက်ျာဘက်ရှိ၏ ငါကသူ့ကိုကနေနွမ်းခဲ့ပုံပါဘဲ။ ဤအညစ်ညမ်းကြယ်ပွငါ၏အရည်းစားများအတွက်မဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအုပျစိုးခဲ့ပါတယ်နှင့်အတူဒါဟာအားလုံးထိုကာလများကဲ့သို့ပါပဲ။ ထိုအ, လွန်းအချို့လိုက်တယ်လမ်း, သူမ၏အဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျပိုငျးဆိုငျရာလိုအပ်ချက်အတွက်။ "
ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းယောက်ျားကပိုလေးနက်နည်းလမ်းများမှာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ထံမှ detach စေကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါသလော porn သုတေသန (ဘာသာရေးအုပ်စုများကြောင့် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှားသက်သေပြဆိုလေ့လာမှုအပေါ်ရယူနှင့်အတူ) အများကြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့်ဆူး-flinging ၏ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်သော်လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး dopamine-oxytocin combo အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ထဲမှာဖြန့်ချိကြောင်းထင်ကြေး အမူအကျင့်ကုထုံး Andrea Kuszewski ကတောင်းဆိုထားသည်အဖြစ် "ထဲကဓာတုပစ်စညျးချစ်ခြင်းမေတ္တာဆေး," ။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းအနေနဲ့စိတ်ခံစားမှုကို attachment ဖွဲ့စည်းရန်ပိုမိုရှိုင်းနေအကြောင်းရင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်ပစ်ခတ်သူတွေကို neurotransmitters ရနိုင်ရန်အတွက်လိင်ရှိသည်ဖို့မလိုပါ။ သငျသညျ porn စောင့်ကြည့်သည့်အခါ, "သင်က bonding ပါတယ်," Kuszewski ကပြောပါတယ်။ "ထိုဓာတုပစ္စည်းသင်ခံစားချက်ရှိသည်ဖို့ပြန်လာမယ့်သိမ်းထားချင်ပါစေ။ " လူ porn အပေါ်ပေမယ့်အလားအလာကြောင့်တစ်ဦးအာရုံကြောကို attachment ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုချွတ်ရဖို့သာခွင့်ပြုဘယ်ဟာ။ သူတို့ကအနှစ်သာရ, ရက်စွဲ porn အတွက်လို့ရတယ်။
ထိုအ tripod-in-the-ထောင့် porn အဖြစ်က high-def Wonderland သို့တစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာ, ငါတို့လိင်စောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ရှိမရှိပေါ်မှာငါတို့ဆုပ်ကိုင်, oxytocin ၏အကူအညီနှင့်အတူ, လျှော့ပေးရေးလိမ့်မည်။ ကျွန်မအင်တာဗျူးလူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းမင်းသမီးကိုကြည့်ခြင်းမှသူတို့ရတာဝန်ခံ၏မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့ In-အောင်ညစ်ညမ်းမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးပိုမိုကွန်ကရစ်ပါဝင်ခဲ့ဖူးအမှန်တကယ်လိင်လုပ်ရပ်ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအဖြစ် porn ကိုကြည့်၏လုပ်ရပ်ကိုဖော်ပြရန်တဲ့သဘောထားကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ "Kasey [Kox] အပြည့်အဝဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိနဲ့သူမရဲ့အိပ်ရာထဲကအကြှနျုပျကိုမှာပြုံး, ဒါမှမဟုတ်ငါနောက်ကွယ်မှထံမှသူမ၏လုပ်နေတာပေါ့သောအခါငါချစ်" တွင် Ron သည်ဗိသုကာကျောင်းသားကပြောပါတယ်။ "ငါသည် Kasey တဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်း get နဲ့ကျွန်မဒါကြောင့်ဖွင်မိပါတယ်။ ငါခေါင်းမူးရ။ "
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးစရာအားလုံးသည်ရာ: ဘယ်လိုတခါတရံ flaccid ရှိခြင်းပါဘူး, တခါတရံကိုဖြည်းဖြည်းချင်း, မကြာခဏဆိုသလိုမူးဝြေခင်းလိင်အဆိုပါလက်ခံရရှိအဆုံးအပေါ်မိတ်ဖက် impact? Sadie, 29 ဘော်စတွန်အတွက်အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့်, သူမ၏အမှတ်စေရန်စွမ်းဆောင်ရည်အနုပညာရှင်နီကိုးလ်ဘလက်မင်းကိုးကား: " '' အဘယ်သူမျှမဘုန်းအသရေသည်လူကြီးပြင်းပြီးနောက်မှသာလူကိုလိုက်လူကိုလိုက်-လူကို fuck ဆိုတဲ့မည်သို့သိသောလူတို့သညျခစျြစေဖို့ကြိုးစားနေအတွက်ရှိပါသည် porn ပေါ်မှာ။ '' ငါတစ်စုံတစ်ဦးကများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်အတူပါလိမ့်မယ်လာသောအခါ, ယရှေုသမို porn ၏ fuck ဆိုတဲ့ကြင်နာသငျသညျကွညျ့ရှုခဲ့တယျခရစ်တော် fucking "Sadie, ဆက်ပြီး" အတိတ်ကာလကြိမ်ရှိခဲ့သည်? သငျသညျ့ kitty အပြစ်ပေးပါသလား? အသုံးမကျသော!"
"porn အဖြစ်မှန်နှင့်အဖြစ်မှန်အဖြစ်မှန်များအကြားခွဲခြားရန်ပျက်ကွက်ရှိပါတယ်," မျောနီကာ, 27 ကပြောပါတယ်။ "တစ်ဦးကကောင်လေး '' ကြက်စီး, ကြက်စီးမျောလိုက်ပါသွား! ', ငါ့ကိုမှာအော်ဟစ်ထားရှိမည် ငါဒါခက်ခဲကျနော်တို့ကိုရပ်တန့်ခဲ့ရသည်ရယ်မောခဲ့သည်။ "
အဖြစ်မှန်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏ blending ၏ရလဒ်အဖြစ်အမျိုးသမီးတချို့လိုလိုလားလားစိတ်ဝင်စားသူတို့ရဲ့ယောက်ျားစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာစည်းမျဉ်းသစ်တစ်ခုအစုံအားဖြင့်တစ်လျှောက်တွင်ကစားရန်ရှေးပါပွီ: သူတို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ porn ကြယ်ပွအယောင်ဆောင်နေသည်ဟုပါတယ်။ Sadie သည်အိမ်ခြံမြေအေးဂျင့်တစ်ဦးဘုံအရာ-လစ်သုတ်ပြောင်နွမ်းအဖြစ် "[Porn-စတားအတွေ့အကြုံ" ယောက်ျားတွေတစ်တွေအများကြီး PSE ပု] မျှော်လင့်ထားရန်လာကြပြီ "ဟုဆိုသောအပေါက်-နှင့်အမျိုးသမီး၏ပဒေသာမှဝင်ရောက်ခွင့်ထက်ပို ပေးပျော်ရွှင်။ အနည်းငယ်ကြောင့်ပျော်မွေ့မယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးထိုသို့ Harrow ပါပဲ။ ငါသူတို့ကဖြစ်ပျက်စေမနိုင်လျှင်, သူတို့ရဲ့ရည်းစားအွန်လိုင်းဆုတ်ခွာမည်ကိုကြောက်ရွံ့ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ "
Monty, 31, သေနတ်ပစ်မြင်ကွင်းများအကြားတစ်နာရီခန့်အွန်လိုင်း porn မှ masturbating တစ်ရက်သုံးစွဲတဲ့သူ Queens, တစ်ဦးထံမှသရုပ်ဆောင်သူကပြောင်းကုန်ပြီသတိထားမိရဲ့ကပြောပါတယ်။ "ငါသည် porn နှင့်အတူတစ်ဦးလက်နက်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဖြစ်ဟန်သူတစ်ဦးကမိန်းကလေးနှင့်အတူရှိ၏" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "သူမဟာသူမထွက်-fuck ဆိုတဲ့ဖို့ကြိုးစားနေထားရှိမည်ဒီစိတ်ကူးယဉ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရှိခဲ့ပါတယ်။ "
"အမျိုးသမီးများဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှည့်နေကြတယ်" ဟုအီဗန်လည်း 31 ကပြောပါတယ်။ "ကျွန်မနေတဲ့စိတ်ကိုနူးမိပါတယ်။ ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ arousal အပေါ်ကိုချွတ်ရ။ သို့သော်လည်းငါသည်အမြိုးသမီးမြားယခုအများကြီးပိုပြီးအသံလာပြီဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါတယ်။ ကျွန်မသတိထားမိပါဘူးတစ်ခုခုလုပ်နေတာပေါ့, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေ porn တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်တူတဲ့မှစတင်နေကြသည်ဖြစ်စေ။ ရိုးရိုးသားသား, ကကြင်ကြင်နာနာ၏လိုက်တယ်ပါပဲ။ ငါကကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်သေချာမသိဘူး။ "
တိုနီ, 48, အိမ်ထောင်၏အနှစ်နှစ်ဆယ်ပြီးနောက်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသူ၏ဇနီးနှင့်ကွဲကွာနေသူကိုစိန့်ပေါလုဝဘ်ဒီဇိုင်နာသည်, အတွေးကိုပဲ့။ "ငါသည်အစဉ်အမြဲညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များတွင်အမျိုးသမီးများကိုညစ်ပတ်ပစ္စည်းပစ္စယဟုပြောသည့်အခါတကယ့်ပူင်ထင်ပါတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "အများအားဖြင့်သူတို့ကပဲစာသား, ဖြစ်ပျက်ရဲ့သော shit narrating ပြဇာတ်-by-ကစားပေးခြင်းနေ: 'သင်တို့သည်ငါ့ကို fucking ပါတယ်! သင့်ရဲ့ဒစ်ရဲ့, ငါ့မြည်းသည်ကား! အခုသင့်ရဲ့ကြက်နို့စို့တာ! ' ဘာပဲအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကြောင်းငါ့အဘို့မယျ။ သို့သော်မကြာသေးမီကငါနှင့်အတူရှိ၏အမျိုးသမီးတစ်ဦးသမျှသောပစ္စည်းပစ္စယဟုစတင်ကပဲကြင်နာငါ့ကိုအပါအဝင်။ သူမသည်အနည်းငယ်အခွံမာသီးသလိုပဲ။ "
ဒီတော့တစ်ဦး conundrum ပေါ်ထွက်လာ။ ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့် oversaturated ယောက်ျား, porn ကမ်းလှမ်းသောအမျိုးမျိုးအဘို့အလျှို့ဝှက်စွာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု။ အမျိုးသမီးများ, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် '' လိင်စိတ်အတွက်ကျဆင်းမှုကိုသတိပွုမိ, ယောက်ျားသူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုကြောင်းမြင်ကွင်းများ၏မျိုးပွနျလညျသရုပျကြိုးစားပါ။ ယောက်ျားတစ်ဦးရလဒ်အဖြစ်, တကယ်ထွက် freaked ရ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးများနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ကူးယဉ်အမျိုးသမီးတွေအတူတူခန္ဓာကိုယ်အတည်ချင်ကြဘူး။ သို့မဟုတျ, Ron analogizes အဖြစ်: "Ghostbusters သတိမရကြသလော ဘယ်လိုမေတ္တာ၌ Bill Murray ဒါန, အ Sigourney Weaver ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူခဲ့သလဲ သူကပင်သူမ၏သခင်ဘုရားနှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုရန်သဘောတူဖို့ကံကောင်းခံစားရပေမယ့်သူကသူမ၏တံခါးနားမှာတက်ပြသသည့်အခါထို့နောက်သူမနတျဆိုးစှဲရဲ့, သူမ၏ဦးနှောက်ကိုထုတ် fuck ဆိုတဲ့သူ့ကိုတောင်းစား, ခြေလေးသူမ၏အိပ်ရာအထက် floating ။ ထိုမင်းသည်လုံးဝက rattled ရဲ့မြန်ဆန်အလုံအလောက်ရှိပါတယ်ထဲကမရနိုငျပါ။ ကောင်းပြီ, ကသင့်ရဲ့ရည်းစားရုတ်တရက်တစ်ဦးညစ်ညမ်းမိဖုရားများကဲ့သို့သရုပ်ဆောင်စတင်သည်သည့်အခါများကဲ့သို့ဘာပါပဲ။ သင်သွားရ where'd '' ကလေး, တူနေ? ကိုယ့်ကိုငါ့ရည်းစားကိုပြန်ချင်ကြတယ်။ '' "
မဆိုစေ့စေ့စပ်စပ်သုတေသီကဲ့သို့ပင်, ငါသီအိုရီစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါသည်သူတို့၏နည်းပညာကနေတစ်ရက်အားလပ်ရက်ယူလူတွေကိုအားပေးသောနယူးယောက်အခြေစိုက်ဂျူးအုပ်စုကို Reboot ကကမကထ Unplugged အမျိုးသားနေ့ကိုခေါ်တစ်ခုခုလောက်ကြားသိခဲ့ရတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ဖြုတ်ဖို့ရွေးချယ်: ငါအိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီမကြာခဏ tawdry ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပုံမှန်အတိုင်းစီးရီးသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ငြင်းဆန်သည်။ အခုတော့ငါဆက်ဆက် porn အားစွဲချက်တင်ရန်ကြိုးစားနေမဟုတ်ပါဘူး, သို့မဟုတ်ပါကသူတို့တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၌ရှိကြ၏ဖြစ်စေ, ယောက်ျားရဲ့ဘဝတွေကိုအတွက်နေရာမရှိရှိပါတယ်ကောက်ချက်ချရန်။ ထိုအခါငါအချို့စုံတွဲများနေဆဲကအလှည့်-on ရဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ကိုရှာဖွေကြောင်းညံံ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်မကြာခဏဟာအလွန်ရှုပ်ထွေး partner ၏မျက်စိကိုသို့စိုက်ကြည့်သည်အိပ်ခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာဖွေမတွေ့ရှိနေလျှင်မူကားကတဦးတည်းရဲ့အကြားဆက်ဆံရေး realigning ရုံတစျခုရဲ့အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးအထူးသဖြင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ပေလိမ့်မည်။ ဒါနဲ့အချို့ထို့အတွက်ပြုလေ၏။
ငါနေ့အဘို့ porn မပါဘဲသွား၏။ ထိုအခါငါနှစ်ယောက်ကကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်သုံး။ စတုတ္ထနေ့ရက်တွင်, ငါသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံများ၏ကံကြမ္မာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသာကိုယ်အဘို့စကားပွောနိုငျပေမယ့်များနှင့်ဘာမျှမ, ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် "ငါသည် Porn-related Erectile အလုပ်မဖြစ်ထံမှပြန်လည်ပုံ"